”Waxaan gabadha usoo dhaamiyaa biyaha iyaduna waxay i siisaa qaad & quud bilaash ah!” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan gabadha usoo dhaamiyaa biyaha iyaduna waxay i siisaa qaad & quud...
”Waxaan gabadha usoo dhaamiyaa biyaha iyaduna waxay i siisaa qaad & quud bilaash ah!”
(Hadalsame) 18 Agoosto 2021 – “Waxaan tegey Tanzania oo ay joogtay gabar aan qaraabo nahay. Guriga dhawr nin ayaa raashinka ka cuna gabadhuna waxay iibisaa qaadka. Biyaha meel fog ayaa laga soo dhaamiyaa ninkeeda iyo dadka guriguna gabadha kama caawiyaan biyaha culayskooda.
Arrinkaas waan dhibsaday oo anigaa bilaabay inaan biyihii gabadha u soo dhaamiyo. Waxaan ahay wiil soo qaxay lacagna ma haysto marka gabadhu markaan qaad uga baahdo lacag igama qaaddo.
Nin raggii guriga ka cuntayn jirey ka mid ah ayaa maalin ka sheekeeyey noloshiisii Afrika iyo inuu soddon sano ka hor joogey halkaas oo mar waxaas iibin jiray marna baabuur ka shaqayn jirey.
Waxaan ku iri maxaad hadda maal iyo carruur haysaa? Wuxuu yiri waxba. Waxaan iri oo maxaad marka ku mashquulsanayd. Wuxuu yiri waxaad adigu hadda ku mashquulsan tahay ayaa cimrigaygii la tegey. Waxaan iri maxaan anigu mashquul ku ahay?
Wuxuu yiri sow heblaayo biyaha uma soo dhaamisid? Waxaan iri haa. Wuxuu yiri sow iyaduna cunto iyo qaad bilaash kuguma siiso? Waxaan iri haa. Wuxuu yiri intaasaan ku mashquulsanaa. Markaas ayaan baraarugay oo go’aansaday inaan sii tacabbiro oo meel aan ka shaqaysto doonto.”
Sheekadan labaatan sano ka hor ayaan ka akhriyey buug la oran jiray “Toddoba kun oo kiiloomitir iyo Koonfur Afrika” magacii qoraaga waan illaaway laakiin wuxuu ahaa buuggii ugu wanaagsanaa ee aan ka akhriyo qaxootinnimada Soomaalida Afrika.
FG: Ereyadii sheekada ma xasuusto marka micnaheedii ayaan soo gudbiyey.
Previous article”Muqdisho ma guryo & geedo ayaa ku yaalla?!!” – Sida ay Afrika uga fal-celisey sawirka Muqdisho
Next articleKenya oo kashiftay dan wayn oo ay ku qabtey dalka Afghanistan oo meesha ka bixi karta